Home » Lahatsoratra farany farany » Divay & Fanahy » Divay manankarena any Italia Tsy misy zava-baovao: Grapes Go Native
culinary • Kolontsaina • Vaovao farany Italia • Vaovao • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Divay & Fanahy
Mpanakanto: Miki De Goodaboom
Italia no hany firenena eto amin'izao tontolo izao manana voly amin'ny faritra rehetra, manomboka amin'ny morontsiraka mando ka hatrany am-pototry ny Tendrombohitra Apennine, ny Alpes Italiana ary ny Dolomites. Ny voaloboka dia maniry avy amin'ny latitude 36 degre ao amin'ny nosy Pantelleria atsimo indrindra ka hatramin'ny 47 degre eo amin'ny lohasaha Alpine any Valtelina.
Maniry any amin'ny faritra pedoclimatika tena samy hafa izy ireo (mikrôklima ao anaty tany izay mampiditra ny vokatry ny hafanana, ny votoatin'ny rano ary ny aeration).
Saika ny 28 isan-jaton'ny karazana voaloboka eran-tany dia avy any Italia.
Maherin'ny 85 isan-jaton'ny velarantanin'i Italia no natokana ho an'ny fambolena voly misy karazany efa ela (na dia tsy misy karazany aza no manjaka).
Hisy divay ve raha tsy misy Italia?
Mahaliana ny manamarika fa raha jerena ny politika mavitrika ao amin'ny firenena (hatramin'ny tapany faharoa amin'ny taonjato faha-19), sy ny maha-zava-dehibe ny tsena eo an-toerana (hatramin'ny faran'ny taona 1970), ny fahasamihafan'ny toe-javatra mitombo dia nitarika an'i Italia hitahiry ny tsenam-barotra. lova tena manankarena amin'ny karazana voaloboka efa nisy hatramin'ny fiandohan'ny fotoana.
Ny divay dia miovaova sy sarotra
Sangiovese, ilay voaloboka mena italiana be mpitia indrindra eto amin'ny firenena, zara raha mandrakotra ny 12 isan-jaton'ny faritra fambolena voaloboka nasionaly, raha toa ka latsaky ny 7 isan-jato kosa ny an'ny voaloboka fotsy, Trebbiano Toscano, mahatonga ny toe-javatra mitombo ny divay Italiana ho isan-karazany. Ny ampelologist Anna Schneider dia nanombatombana fa eo amin'ny 2000 eo ho eo ny karazana voaloboka nambolena any Italia (tamin'ny 2006). Misy manam-pahaizana hafa milaza fa eo amin'ny 1000 eo ho eo amin'ireo karazana voaloboka novolena any Italia no efa fantatra ary 600 no ampiasaina hanamboarana. divay amin'ny isa manan-danja ara-barotra.
Rejistra nasionaly momba ny karazana voaloboka
Raha toa ka tsy voatanisa ao amin'ny National Registry ny karazana voaloboka, dia tsy misy akora zavamaniry avy amin'ny karazany azo atao amin'ny fanaparitahana any amin'ny akanin-jaza ara-barotra. Amin'izao fotoana izao dia misy karazany 461 voaloboka ofisialy, fa ny olon-tsotra sy ny andrim-panjakana dia miasa mba hampiditra hafa. Amin'ireo voaloboka roapolo nambolena tany Italia, 16 no teratany ary efatra iraisam-pirenena (Merlot, Chardonnay, Pinot Grigio ary Cabernet Sauvignon) miaraka amin'i Merlot sy Chardonnay ao amin'ny folo voalohany.
Karazana voaloboka: Mizara telo
teratany (na teratany)
Iraisam-pirenena (na vahiny)
Heverina ho teratany ny voaloboka raha toa ka "teraka" amin'ny toerana iray izy ireo ary saika mifandray amin'io toerana io ihany. Azo inoana fa maro amin’ireo antsoina hoe “voaloboka teratany italiana” no tena avy amin’ny grika na Moyen-Orient, nafarana tamin’ny alalan’ny tafika romanina niverina, mpivarotra fenisianina tantsambo ary mpanjanaka grika. Ian D'Agata dia nanapa-kevitra fa, "Raha ny marina, tsy ny rehetra voaloboka italiana noho izany dia tena teratany ary mety ho teny tsara kokoa hamaritana ireo karazana teratany izay tsy italiana mazava ny fiaviany…”
Ny voaloboka voajanahary (tsy toy ny Cabernet Sauvignon sy Chardonnay) dia tsy mafy ary mora voataonan'ny:
Fomba fanamboarana divay efa tranainy (izany hoe, mioty voaloboka rehetra miaraka, na inona na inona fahamatorana tsara indrindra)
Ny tsy fisian'ny fahadiovana amin'ny trano fitehirizam-bokatra (mandray anjara amin'ny fahapotehan'ny divay)
Ny fahamatorana tsy ara-dalàna ny voaloboka
Vokany (amin'ny tranga sasany):
Ny tsiron'ny divay italianina tany am-boalohany dia hafa noho ny divay ankehitriny
Ny voaloboka dia mamokatra andian-tsarimihetsika kely ahafahana mamokatra vola kely
Ny karazana sasany dia voahidy tanteraka ary tsy misy asidra izay manolotra divay manjavozavo sy fisaka
Ny voaloboka dia matotra amin'ny fotoana samy hafa miaraka amin'ireo voaroy maitso mbola tsy masaka eo akaikin'ny voany efa masaka. Azo esorina ny voaroy mbola tsy masaka; na izany aza, dia dingana lafo vidy sy mandany fotoana izay atao amin'ny tanana na milina fanasokajiana optika lafo vidy. Raha tsy vita ny fanasokajiana dia mety hanana hanitra sy tsiro maitso maitso ny divay aterany.
Mety hampidi-doza ho an'ny voaloboka teratany Italia ny teknika fanamboarana divay maoderina ary azo tsinontsinoavina ny anjara asan'ny leviora. Ny tadin'ny masirasira isan-karazany ampiasaina amin'ny fermentation alkaola dia mety hitondra vokatra enolojika samihafa na dia ny karazana voaloboka mitovy, mitombo amin'ny tany mitovy aza, no ampiasaina.
Karazan-boaloboka voajanahary (voatokana)
1. Aglianico del Taburno DOCG (La Fortezza Soc. Agr. Srl). Niorina ho DOC tamin'ny 1986; lasa DOCG tamin'ny 2011. Teratany any Campania, Basilicata (faritra atsimo) ny voaloboka mamokatra mena sy raozy feno vatana. Miaraka amin'i Sangiovese sy Nebbiolo, Aglianico dia iray amin'ireo karazana Italiana telo lehibe. Matetika ny divay avy amin'io karazana io dia antsoina hoe Barolo any atsimo noho ny fahaizany mamokatra divay voadio sy be pitsiny. Ny divay vokarina avy amin'ny Aglianico dia garnet lalina amin'ny maso miaraka amin'ny hanitra sôkôla sy plum ary mirona ho feno vatana miaraka amin'ny fanosotra mafy, asidra avo ary mety ho antitra tsara. Rehefa mihantitra izy dia miharihary kokoa ny voankazo ary mifandanja kokoa ny tannins.
2. La Fortezza. 100% Aglianico del Taburno DOCG. Ruby mena amin'ny maso, ny orona dia mahita ny fofon'ny voaroy mainty. Izy io dia malefaka eo amin'ny lanilany miaraka amin'ny fanamarihana mahafinaritra amin'ny jiro serizy mainty. Ny voaloboka dia alaina amin'ny tanana amin'ny faran'ny volana oktobra ary mandany 8 volana amin'ny vy, 10 volana fanampiny amin'ny barika ary avy eo amin'ny barika. Ity divay ity dia tokony hosotroina tsara alohan'ny hisotroana. Arosoy miaraka amin'ny paty, hena (indrindra fa latsa, lasopy ary saosy) ary/na fromazy efa antitra.
3. Lambrusco Modena DOC (Cantina Ventiventi Societa Agricola Il Borghetto). Ny voaloboka dia tsy maintsy ambolena ao amin'ny faritanin'i Modena ary ahitana ireto karazana manaraka ireto (85-100%): Grasparossa Lambrusco, Lambrusco Salami, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Oliva Lambrusco (ampiasaina irery na miaraka amin'ny fahazoan-dàlana). fanampin'ny Ancellotta ho an'ny loko) voaloboka, Malbo Gentile ary/na voaloboka Fontana (hatramin'ny 15 isan-jato). Ny voaloboka dia mamokatra divay mena manjelanjelatra miaraka amin'ny loko robina, hanitra malefaka ary mamy eo amin'ny lanilany nohatsaraina miaraka amin'ny naoty voninkazo.
Mafana ny toetr'andro miaraka amin'ny fahavaratra mafana sy ririnina mangatsiaka. Ny tany ao amin'ny lemaka Emilia Romagna dia manankarena sira mineraly ary ny tanimboaloboka eo amin'ny tehezan-tendrombohitra dia manjaka amin'ny tanimanga misy fasika, mamokatra divay maivana sy mankafy fony izy mbola tanora.
Ny divay dia afaka mivoatra ao anaty tavoahangy ary matetika ampiasaina amin'ny fomba nentim-paharazana. Ny fanerena dia mety tsy mihoatra ny 80 litatra izay avo kokoa noho ny Champagne. Ny fermentation dia mitranga amin'ny mari-pana ambany (23-25 ​​degre) mba hitazonana ny fofon'ny voankazo vaovao sy hanesorana tannins kely.
• Cantina Ventiventi Rose Lambrusco Di Modenado. 100 isan-jato Sorbara voaloboka.
Ny fianakaviana Razzaboni no tompon'ity tanimboaloboka ity ao amin'ny tanànan'i Medolla ao Modenese. Ny tanimboaloboka dia mampiasa Metodo Classico, mamorona divay vaovao sy miavaka. Nohamarinina organika tamin'ny taona 2019, ny fijinjana mekanika dia voalahatra amin'ny ora mangatsiaka indrindra amin'ny andro. Mangatsiaka avy eo ny voaloboka ary potehina malefaka. Ny fermentation dia atao eo ambanin'ny mari-pana voafehy amin'ny vy tsy misy dikany ary ny fanadiovana mangatsiaka maharitra amin'ny vy. Fanampiana tsy maintsy sy faharoa fermentation ao amin`ny tavoahangy dia atao eo ambany fanaraha-maso ny mari-pana.
Mavokely malefaka amin'ny maso, misy voankazo mena mahafa-po ny orona. Malemy sy matsiro amin'ny lanilany voalanjalanja amin'ny mineraly. Ny perlage manjavozavo sy maharitra dia manatsara ny freshness. Afangaro amin'ny hazan-dranomasina.
4. Trebbiano d'Abruzzo DOC (mitovy amin'ny frantsay Ugni Blanc)
Abruzzo dia faritra misy divay any afovoany atsinanan'i Italia manamorona ny morontsirak'ny Ranomasina Adriatika. Araka ny lalàna ofisialin'ny DOC, ny divay Trebbiano d'Abruzzo dia tsy maintsy atao avy amin'ny 85 - 100 isan-jaton'ny Trebbiano Toscano na Trebbiano Abruzzese na fitambaran'ireo vondrona roa.
Ny voaloboka Trebbiano d'Abruzzo dia voarakitra an-tsoratra tamin'ny 1856 nataon'i Raffaele Sersante izay nanamarika ny lazany sy ny fihanaky ny karazana voaloboka ao amin'ny tanimboaloboka. Izy io dia voaloboka divay fotsy mamokatra be izay niainga tany amin'ny faritra atsimo atsinanan'i Mediterane. Maniry tsara indrindra amin'ny tany argillo-calcareous izy io. Amin'izao fotoana izao, ny antsasa-manilan'ny divay fotsy ao amin'ny firenena no mamokatra.
Ny divay dia miloko volamena, mazàna maina sy voa-mandroso miaraka amin'ny fehezam-boninkazo malefaka misy voankazo mavo, paoma, voasarimakirana ary voninkazo fotsy eo amin'ny orona. Ny lanilany dia mahita asidra voalanjalanja, manentana fanahy, plum mavo mavo manjavozavo. Ny mpamokatra sasany dia mampiasa ny fermentation barika sy/na ny fahamatoran'ny barika mba hanampiana ny fahasarotana, ny halaliny ary ny vatana. Io no hany DOC ao Abruzzo manokana amin'ny divay fotsy. Misotroa tanora sy mangatsiaka. Afangaro amin'ny paty hazan-dranomasina, risotto, lasopy anana, trondro vita amin'ny lafaoro na natono.
Natomboky ny fianakaviana Di Tonno tao Abruzzi ny tanimboaloboka mirefy 32 hektara dia vita amin'ny tanimanga vatosokay, tany misy kalka izay voarafitra sy tatatra, 300 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina. Ny fisafidianana tsara ny voaloboka dia atao amin'ny fiandohan'ny volana septambra. Esorina ny tahon-boaloboka ary arahin'ny maceration mangatsiaka fohy ny voaloboka voatoto amin'ny vy tsy misy pentina arahin'ny fanerena malefaka sy ny fandatsahana ny tsy maintsy. Ny fermentation amin'ny alikaola miaraka amin'ny masirasira voafantina dia maharitra 10 andro; Mitranga volana vitsivitsy aorian'ny fijinjana ny tavoahangy.
Ny loko mololo hatsatra miaraka amin'ny loko maitso mavana dia mampifaly ny maso, manolotra fehezam-boninkazo manankarena ampitomboina amin'ny hanitra voninkazo misy violets miaraka amin'ny paoma, serizy ary paiso eo amin'ny orona. Ny fotoana fohy lany ao amin'ny barika dia mamokatra divay misy tannins izay matevina nefa tsy manelingelina ary ny farany dia madio, madio ary vaovao. Ataovy toy ny aperitif sy/na miaraka amin'ny akoho, hazan-dranomasina, kisoa na ham.
Aglianico dia voaloboka mainty maniry any amin'ny faritra atsimon'i Italia (Basilicata sy Campania). Noheverina fa tany Gresy izy io ary nambolen'ny Phocian avy amin'ny voaloboka tsy fantatra anarana; na izany aza, ny fanadihadiana ADN maoderina dia tsy manohana io fomba fijery io satria tsy dia misy ifandraisany amin'ny karazana voaloboka grika hafa. Avy amin'ny tovona pa - mamaritra ny fitaona ankehitrinin'ny endriky ny atao, ny fototeny Aglianiche (1520) Nanapa-kevitra i Denis Duboudieu, manam-pahaizana momba ny oenologie, fa “Aglianico angamba no voaloboka manana tantaran'ny mpanjifa lava indrindra.” Nampiasaina izy io mba hanamboarana divay Falemiana tamin’ny andron’ny Romanina, ilay divay nalaza indrindra novokarina tany Roma fahiny ary noheverin’i Pline Loholona ho tsara.
Ny Agianico dia divay mena manana rafitra, asidra mavitrika ary fahaizana mihantitra. Ny fofon'ny voninkazo, ary indraindray ny tannins tsy azo tsinontsinoavina dia miditra rehefa manandrana mankafy ny mineraly matsiro. Mahavariana izy io, ary ny divay avy amin'io karazany io dia azo hankafizana tanora sy antitra. Ampitahaina matetika amin'ny Nebbiolo, ny voaloboka be Barolo sy Barbaresco. Mifandray amin'ny faritr'i Campania any atsimon'i Italia avy any amin'ny Ranomasina Tyrrhenian anisan'izany i Naples, Pompeii, morontsirak'i Amalfi, Salerno ary Paestrum. Hiverina any amin'ny Basilicata.
(La Guardiense – Sannio 2014). 100% Aglianico
Ny maso dia faly amin'ny loko mena lalina sy maizina ary ny orona dia mahita ny serizy mifangaro amin'ny lavanila (avy amin'ny barika), mifangaro amin'ny naoty masiaka. Ny lanilany dia miala voly amin'ny tannins izay mamorona traikefa tsiro malefaka sy silky.
Ny tapany faharoa amin'ny volana oktobra no jinjaina ny voaloboka. Maceration amin'ny hoditra mandritra ny 18 andro miaraka amin'ny paompy vitsivitsy isan'andro, 20 isan-jato no mandeha ra. Perfect apres-ski; ampiarahina amin'ny saosy paty/hena, lasopy anana, henan-kisoa, zanak'ondry natono, ary hena sitrana.
6. Sfozato (fanerena ny voaloboka) DOCG
Sfozato dia mamokatra divay mena mahery mifototra amin'ny karazana voaloboka Nebbiolo ao Valtellina, distrika iray any amin'ny faritr'i Lombardy any avaratr'i Italia. Mahazo toaka avo kokoa sy fifantohana bebe kokoa amin'ny fanamainana ny voaloboka (passito). Voafantina ny voaloboka tsara indrindra ary tsy maintsy esorina izay voaroy efa lo na simba satria ny fanamainana dia mifantoka amin'ny tsy fahalavorariana.
Apetraka amin'ny tsihy mololo ao amin'ny efitra fatoriana misy rivotra tsara ny fehezam-boninkazo rehetra ary mijanona mandritra ny 3-4 volana, ka ny voaroy tsirairay dia very 40 isan-jaton'ny lanjany noho ny etona rano izay mampifantoka ny siramamy voajanahary ao amin'ny voaloboka. Ny ranom-boankazo dia mivadika ho siropia mamy ary ny Sforzato mahazatra dia mamokatra divay feno vatana, avo amin'ny alikaola ary manankarena amin'ny tsiron-tsakafo mahavelona amin'ny zava-manitra mamy (izany hoe, licorice, jirofo ary kanelina), plum natsatsika, prunes ary voaloboka. soso-kevitra ny tara sy ny raozy.
Ny tanimboaloboka dia naorin'i Alberto Marsetti tamin'ny 1986 ary mino izy fa i Nebbiolo dia manana tsiro mahafinaritra miaraka amin'ny toetry ny toetr'andro. Ao Sondrio no misy ilay tanimboaloboka mirefy 10 hektara izay feno fasika ny tany vokatry ny fahapotehan’ny vatolampy.
Sfursat della Valtellina DOCG no tranainy indrindra amin'ny divay Valtellina. Ortensio Lando (1540) dia nanonona azy io ary ny antontan-taratasy hafa dia nanamarika an'i Sforzato tamin'ny taona 1300. Natao ho an'ny fianakaviana ny divay ary natao ho fanafody hamerenana amin'ny laoniny ny aretina. Ankehitriny dia fantatra amin'ny anarana hoe divay mendri-kaja an'i Valtellina ny karazany. Antitra amin'ny barriques, ny divay dia miteraka fofona mahery amin'ny morello-cherry amin'ny alikaola miaraka amin'ny tannins malefaka sy asidra tsara. Afangaro amin'ny sôkôla mainty.
Ny hoavin'ny voaloboka teratany
Ny voaloboka tsy fahita firy dia fantatra amin'ny teny maro ao anatin'izany ny manjavozavo, esoterika, hafahafa, indizeny, autochthonous na adino. Mety hanontany tena ny mpanjifa divay salantsalany hoe nahoana ny somms na geeks divay no mientanentana amin'ny "hahitana" voaloboka tranainy. Zava-dehibe ny manamarika fa ny fisotroana divay avy amin'ny voaloboka manjavozavo dia azo antoka fa "avo" satria manome teboka tsy fitoviana sy fiovan'ny tsiro ho an'ny mpisotro divay. Mihamitombo hatrany ny fitakiana ny fahasamihafana eo amin'ny tontolon'ny divay ary ny tanjaky ny karazana voaloboka an-jatony (na an'arivony) dia tsy manan-danja fotsiny amin'ny maha-iraka azy, mitahiry ny fahasamihafana eo amin'ny tontolon'ny zavamaniry, fa manome fiarovana ihany koa manoloana ny fiakaran'ny hafanana.
Ny faritry ny divay manerana an'i Eoropa dia nanomboka toeram-pambolena mba hitahiry ireo karazana indizeny tsy fahita firy. Any atsimon'i Frantsa, ny Domaine de Vassal, toeram-pambolena an'ny fanjakana (1878) dia mitazona karazany 7800 eo ho eo, fanangonana lehibe indrindra eran-tany. Any Savoie, Frantsa, ny Alpine Ampelography Center dia mitady karazany tsy fahita firy. Manana trano fitaizana zaza tsy ampy taona izy, manao micro-vinification ary manao fihaonambe isan-taona. Wine Mosaic, natomboky ny Lean-Luc Etievent sy Arnaud Daphy, dia mandrisika ny fiarovana ireo karazana voaloboka tany am-boalohany ao amin'ny Mediterane.
Maro amin'ireo "mpitandrina ny voaloboka" no mino fa ny fiovan'ny toetr'andro dia mitaky voaloboka hafa hambolena amin'ny ho avy, ireo izay tsy dia matoy loatra, mora levon'ny masoandro na manome firafitry ny asidra na tannika tsara kokoa noho ireo karazana mahazatra. Mihena ny karazany tranainy noho ny voka-dratsin'ny vokatra ary tandindomin-doza amin'ny fiovan'ny toetr'andro ny karazany mahazatra. Ny tontolon'ny divay dia miezaka miomana amin'ny fanovana sy mamelona ireo karazany taloha ho an'ny vahaolana vaovao.